galmudugnews.com » SomDoc waa adeegii ugu horeeyay ee af-Soomaali ku soo bandhiga Online Rug Caafimaad Home Contact US
Home » CAAFIMAADKA, WARARKA » SomDoc waa adeegii ugu horeeyay ee af-Soomaali ku soo bandhiga Online Rug Caafimaad SomDoc waa adeegii ugu horeeyay ee af-Soomaali ku soo bandhiga Online Rug Caafimaad galmudug on
No Comment Views 163594Mareegto cusub ayaa dhowaan ku soo biirtay bogaga internetka Soomaalida taasoo qawmiyada ku hadasha af-Soomaaliga loogu soo bandhigay online rug caafimaad. Waxaa daadahaynaya dhakhaatiir wax ku baratay hadana ka shaqeeya wadamada reer galbeedka. Waxay diirada saartaa dhibka sida gaarka ah u haysta qurbo-joogta isla markaana waxay Soomaalida wadanka gudahiisa joogta u soo bandhigtaa caafimaadka casriga ah ee looga dhaqmo wadamada horay u maray. Adeegyada waqtigan diyaarka ku ah waxaa ka mid ah:
La tasho dhakhtarka: taasoo aad su’aal ku weydin kartid dhakhtarka takhasuska u leh, Soomaali iyo Ajaaniba. Waxaa diyaar ku ah dhakhaatiir aqoon durugsan u leh dhaqanka iyo cudurada ku badan Soomaalida. Adeega “second opinion” ayaa isna la amaanay kadib markay ka tala-bixiyeen amaba soo kala dhex-galeen Soomaali ka cabanayay dhakhaatiirtooda qoyska (GP).
Cudurada Guud, haweenka, raga iyo safarka. Markaad akhrisatid faah-faahinta cudurka qofkii doonaya inuu helo daawada wuxuu ka jawaabaa su’aalaha caafimaadka kadibna wuxuu awood u leeyahay inuu dalbado. Dhakhtar ayaa codsigaaga ka fiirsanaya intaan daawada lagu soo dirin waxaana laga yaabaa inuu teleefoon kuu soo diro. Waxaa si aad ah loo amaanay qeybaha daawada cayilka, laabjeexa, kacsi la’aanta, bidaarta, cidiyaha iyo fitamiinada.
Adigoo gurigaaga jooga iska baar: baaritaanada ilaa waqtigan diyaarka ku ah waxaa ka mid: candhuuf ku ogow inaad qabtid HIV, Dhibic dhiig ah ku ogow inuu kugu yar yahay fitamiin D, Dhiiga ilma-qabatada saxarada, kalaamidiya test, DNA test iwm
Farmashiye Online: daawo tayadooda la hubiyay oo ay bixiyeen farmashiyaal ku yaal Ingiriiska ayaa laguugu keeni karaa aduunka meel kasta oo aad ka joogtid.
EHIC Card: Ha safrin adigoo aan wadan Kaarka Safarka caafimaadka Yurub. Waxaa mahdiyay dadkii sida lama filaanka ah u jiraday iyagoo safar ku jira. Foomka online buuxi kadibna maalmo gudahood ayaa gurigaaga laguugu keenayaa. Adeegan waxaa waqtigan ka faa’iidaysan kara qofkii degan UK,
Check Up: waxaa loogu talagalay qofkii caafimaad qaba oo doonaya inuu ogaado xaalada caafimaadkiisa. Waxay baaritaan ku sameeyaan xaalada xubnaha jirka ugu muhiimsan, waxay kaloo sheegaan haddii uu jiro cudur bilow ah ama qarsoon oo aan weli soo shaac bixin.
Tijaabi aqoontaada: waa qayb loogu talagalay inay maskaxdaada layliso, aqoontaada caafimaadkana kor u qaado, su’aashaad garan waydo waxaa la socoto falcelin, gaba-gabadiina waxaa lagu siin doonaa shahaado sharaf haddii aad u qalantid.
Medicine For Somalia: tabarucaadkuna kama maqna, waa adeeg u dhaxeeya dadka qurbaha degan ee haya daawooyinka aysan u baahnayn iyo kuwa u dhimanaya daawo la’aan.
Intaas kor ku xusan iyo kuwo kaleba fadlan riix halkan ama soo booqo www.dhakhtar.com
Salaan & Qadarin, Maamulaha SomDoc
Mr Abdullahi Abdirahman Mohamed
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139446 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31881 hitsContact US - 30583 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26144 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25637 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25264 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23899 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23032 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22364 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22354 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21451 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21115 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21108 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20805 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19870 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19869 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19254 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18502 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17810 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17729 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17680 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16903 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16817 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15536 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15473 hits Home Contact US